Barattoonni 'ugguramuun' dhugaadhamoo diraamaa dha? - BBC News Afaan Oromoo
19 Guraandhala 2020
Barattoonni Yuuniversitii Dambi Doolloo qaama hin beekamneen butamaniiru oduun jedhu erga dhagahamee odeeffannoon gama hundaan jiru kan waldhiituudha.
Barattuu kanneen ugguraman keessaa tokko ofiin jechuun odeeffannoo kennite dabalatee odeeffannoon mootummaanis kennaa ture kan waldhiituudha.
Inumaa Ministira Muummee biyyattii dabalatee aanga'oonni mootummaa hedduun dubbiin kun diraamaadha malee waan qabatamaa lafa jiru miti jedhu.
Ugguramuun barattootaa dhugaadhamoo diraamaadha? Haga yoonaatti maaltu jedhame?
'Barattoota ugguraman jedhaman keessaa barattoonni Yunvarsiitii Dambi Doolloo 14'
ALI Sadaasa 24 bara 2012 barattoonni Yuuniversitii Dambi Doolloo rakkoo nageenyaa mooraa keessa ture baqatanii osoo karaa Gambeelaa deemaa jiranii Aanaa Anfilloo fi Gambeela gidduu iddoo 'Suddii' jedhamtutti butamanii ukkaamfamuu bilbilaan maatiisaaniitti himan.
Butamanii guyyaa sadi booda miliqxee ba'uu kan dubbattee turte Barattuu Asmaraa Shuumee namoonni butaman 17 ta'uu miidiyaatti himte.
Tibbuma barattoonni ugguraman jedhaman keessa tajaajilli bilbilaa fi interneetii Godina Qellem Wallaggaarraa cite.
Haalli kun ammoo maatiin daranuu akka dhiphatan godhe.
Sana booda barattoota Yunvarsiitii Dambi Doolloo "ugguraman" jedhaman keessaa 21n isaanii gadhiifamuu Waajira Ministira Muummeetti Itti-gaafatamaan Pirees Sakiriiraatii Obbo Nugusuu Xilaahun EBCf ibsan.
''Barattoota ugguramanii turan keessaa dubartoota 13fi dhiironni 8 walumaa galatti barattoonni 21 karaa nagaa ta'een gadhiifamaniiru." jechuun dubbatanii turan.
Baratoonni 'uguraman' jedhaman kun lakkoofsi isaanii duraan 17 jedhamus akka ibsa aanga'aa mootummaa kanaatti ammoo barattoonni 21 bahanii kanneen biroo ja'a ammallee hafanii jiru.
Lakkoofsi eerame waan wal dhiituuf ibsi aanga'aa kanaa hawaasa keessatti akkasumas miidiyaa hawaasummaarratti falmii guddaa uumee ture.
Erga oduun 'ugguramuu' barattootaa dhagahamee as maatiin barattootaa ijoolleen keenya achi buuteesaanii dhabne jechuun gaaffii isaanii itti fufan.
Tibbuma Obbo Nigusuun ibsa kennan sanammoo qondaaltonni naannoo Oromiyaa waan jedhamu kana akka quba hin qabnee fi dhugaa akka hin taane dubbachaa turan.
Qondaalli Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu waan mudate quba hin qabu yoo jedhan Hoogganaan Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Dheeressaa Tarrafaa ammoo barattonni ugguraman hin jiran jedhan.
Gama biraatiin pirezidaantii Naannoo Amaaraa dabalatee qondaaltonni naannoo Amaaraa barattoonni Dambi Doollootti ugguramuun dhugaa ta'uu dubbataniiru.
Haala kanaan waa'ee ugguramuu barattootaa ilaalchisee odeessi gama Amaaraa, Oromiyaa fi mootummaa Federaalaa irraa ba'u kan dhiitu ta'ee uummata biyyattii shakkisiise.
Rogeeyyiin miidiyaa hawaasummaa oduu gamaa gamanaa fuudhanii kuun tapha siyaasaati ittiin jechaa kuun ammoo mirga warra ugguramaniif qabsaa'aa yoona ga'aniiru.
Mootummaanis erga guyyaa tokko miidiyaa biyyaalessaa EBC irratti odeeffannoo waa'ee ijoollee ugguraman jedhamanii kennee calliseera jechuun komatamaa ture.
Komii mootummaarratti ka'ummoo daran kan hammeessee ture odeeffannoo kennamerratti lakkoofsi himame wal dhiituusaati.
Amajjii 29, bara 2020 Waajjirri Ministira Muummee, Komishiniin poolisii Federaalaa fi Ministirri barnootaa waliin ta'uun ibsa kennaniin namoota 17 achi buuteensaanii dhabame jedhamee gaafatamaa ture keessaa 12 barattoota Yuuniversitii Dambi Doolloo ta'uu mootummaan mirkaneeffateera jedhanii turan.
Qondaaltonni mootummaa wayita ibsa kana kennan waa'ee ugguramuu namootaarratti odeeffannoon ba'aa turee fi kan miidiyaaleen tamsaasaa turan dogoggora akka qabu kaasan.
Barattuun guyyaa sadi erga ugguramtee booda miliquu dubbatte odeeffannoo wal dhiitu baaste kan jedhan qondaaltonni kunneen, ''Dambi Doollootti Damee Odeeffannoo Komaandi postiin namoonni 6 ugguramanii jiraachuu himtee turte, erga gara Finfinnee dhuftee garuu namoota 17tu ugguramanii jiru jettee dubbatte. Kun taatee mudate akka shakkinu nu godheera'' jedhan.
Naannoo Amaaraatti hiriira gaggeeffamaa jira
Ministirri Muummee Itoophiyaa tibba darbe paarlaamaatti dhiyaachuun gaaffii miseensoti kaasaniif wayita deebii kennan, oduun waa'ee ugguramuu barattootaa diraamaa siyaasaati jedhan.
Qaamni uggureera jedhee itti gaafatamummaa fudhates hin jiru jedhan.
Pirezidaantiin Itti Aanaa Naannoo Oromiyaa kan ta'an Obbo Shimallis Abdiisaa wayita gabaasa dhiyeessan humnoonni hidhatanii maqaa bilisummaan Oromoon socho'an barattoota irraan miidhaa suukanneessaa ga'aa turan jedhan.
Qondaalli Biiroo Nageenyaa Naannoo Oromiyaa Koloneel Abbaa Garasuu gamsaaniin Turtii LTV waliin taasisaniin humni nageenyaa biyyattii bakka itti namoonni ugguramaniiru jedhaman sakatta'ee qaama nama uggure homaa waan dhabeef oduun butamuu barattootaa diraamaadha jedhan.
''Qaamni tokko yoo nama uggure waan barbaadu qaba. Waan barbaadu hanga argatutti nama ugguruu danda'a. Kanaachi qaamni nama butee manasaa keessa kaa'ee taa'u hin jiru'' jedhan.
Hanga qaamni itti gaafatamummaa fudhate hin jirretti namoonni dhabamaniiru waan jedhameef qofa ugguraman jechuu hin dandeenyu kan jedhan Koloneel Abbabaa Garasuu mootummaan hanga dhugaan adda ba'utti sakatta'iinsa itti fufa jedhan.
Diraamichi garuu eessaa fi eenyuun akka hojjetamaa jiru ifaa miti jedhan.
29 Amajjii 2020
Dambii Doolloo: Namoonni sadi ajjeechaa dubartii ulfaan shakkaman hidhaman
Barattootni Yunvarsiitii Dambi Doollootti ukkaamfaman haa gadhiifaman jechuun Naannoo Amaaraatti hiriirri gaggeeffamaa jira.
28 Amajjii 2020
Lola Itoophiyaa keessatti deemaa jirurratti paartileen siyaasaa maal jedhu?
Daqiiqaa 39 dura
Daangaa naannolee Amaaraafi Tigraay irratti lolli cimaan gaggeeffamaa jira
Viidiyoo, 'Fageenya 10,000m’n qabxii gaarii fidna jechaa jirra' - Solomoon Baaraggaa
Gareen TPLF haaldureen dhukaasa dhaabuu fooyyeessuun dhiyeesse
'Sudaan loltootashee daangaa Itoophiyaa keessaa akka baaftuuf hawaasni addunyaa dhiibbaa gochuu qaba'
Iyyata IZEMAn filannoon akka irra deebi’amuuf dhiyeeffateef Boordiin Filannoo deebii akka kennu ajajame